၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ မြန်မာနှစ်ဆန်း ၁ ရက်၊ နှစ်သစ်မင်္ဂလာအခါတော်နေ့တွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဆောက်အအုံ၌ အန္တရာယ်ကင်း ပရိတ်တရားတော်နာယူခြင်း မင်္ဂလာအခမ်းအနားကျင်းပ
Apr 17, 2018/0
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေးထိ မေးခွန်းများနှင့် အဆိုများ ဆောင်ရွက်ပြီစီးမှု အခြေအနေ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Vikram Misri အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးရပ်နားစဉ် လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း (၁၀.၄.၂၀၁၈)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးရပ်နားစဉ် လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း(၆.၄.၂၀၁၈)
Apr 09, 2018/0
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်သိန်း သြစတြေးလျနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Nicholas Coppel အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Apr 06, 2018/0
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးရပ်နားစဉ် လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း(၅.၄.၂၀၁၈)
Apr 05, 2018/0
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်မောင်ဝင်း Ooredoo Myanmar Limited မှ Chief Executive Officer Mr. Vikram Sinha နှင့် Telenor Myanmar Limited မှ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Mr. Sigve Brekke တို့အား တွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်သိန်း၊ အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံခြားရေးရာကော်မတီမှ အကြီးတန်းတာဝန်ခံ၊ Ms.Charlotte Oldham-Moore ဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် စက်မှုလက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းသိန်းဇော် ဟွန်ဒိုင်းမော်တာ မြန်မာ Co., Ltd အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
(က)-ကျေးသီးမြို့နယ်၊ အမှတ် (၁၃၁) ခြေလျင်တပ်ရင်းမှ တပ်ရင်းပိုင်အဖြစ် သိမ်းယူရာတွင် ပါဝင်သွားသော နမ့်ကုံးရေကန် ရေဝေရေလဲဧရိယာ ၃၁ ဧကနှင့် တောင်သူများ၏ စိုက်ခင်း ၁၆၅ ဧကအား ပြည်သူပိုင်အဖြစ် ပြန်လည်စွန့်လွှတ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
(ခ)-မိုးမိတ်မြို့တွင် လျှပ်စစ်မီး (၂၄)နာရီ ရရှိသုံးစွဲနိုင်ရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
(စ)- နမ့်မျှော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မန်မိုင်လွိုင်ငင်းကျေးရွာကျေးလက်ရေရှိရေးအတွက် ၂၀၁၄- ၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် (၇၉၀၀) ပေ ရေပိုက်၊ ရေကန်နှင့် ရေတားတမံတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းသည် လုပ်ငန်းပြီးစီးမှုမရှိသည့်အတွက် မည်သို့ဆောင်ရွက်ထားသည်ကို သိလိုခြင်းမေးခွန်း
(က)-ထူးချွန်ထက်မြက်ပြီး အောင်မြင်သော ဘွဲ့ရကျောင်း/သူများကို နိုင်ငံခြားသို့ ပညာတော်သင်စေလွှတ်ရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၃၁) ရက်မြောက်နေ့ (၂၂-၃-၂၀၁၈)
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၃၀) ရက်မြောက်နေ့ (၂၁.၃.၂၀၁၈)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၂၉) ရက်မြောက်နေ့ (၁၆-၃-၂၀၁၈)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၂၈) ရက်မြောက်နေ့ (၁၄.၃.၂၀၁၈) ဒုတိယပိုင်း